अस्ताए नेपालकै चर्चित डाक्टर, जुन रोगको बिशेषज्ञ थिए त्यही रोगले लग्यो यी चर्चित डाक्टरलाई , स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो क्ष्यति – Ramailo Sandesh
डा. श्रेष्ठको फोक्सोमा समस्या थियो । उनको फोक्सोमा क्यान्सर भएको थियो। उनको उपचार चलिरहेको थियो । तर उनको उपचारले सफल सकेन र बिरामी श्रेष्ठको मंगलबार उपचारका क्रममा निधन भएको हो।
चितवनस्थित विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा अंको प्याथोजिष्टका रुपमा कार्यरत उहाँको श्रीमान् जय श्रेष्ठ पनि मेडिकल अंकोलोजिष्ट नै हुनुन्छ ।
डा. जयले श्रीमती सदिनालाई महान योद्धाको संज्ञा दिदैं हरेक दु:ख, पीडाबीच पनि जीवनप्रति सधैं शान्वना, समानता र सकारात्मक सोच कायम राख्ने गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँले डा. सदिनाको उपचारमा संलग्न सबै स्वास्थ्यकर्मीप्रति आभार प्रकट गर्दै दुखद घडीमा साथ सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभएको छ । उनको निधनमा अस्पतालले दुख ब्यक्त गरेको छ । भने उनको परिवार शोकमा परेको छ।
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा रेग्मी
एउटै मन्त्रीलाई ५ मन्त्रालय, विष्णु पौडेल सबैभन्दा भाग्यमानी